जनसेवाको परीक्षामा फेरि उभिएको छु – Rajdhani Daily
जनसेवाको परीक्षामा फेरि उभिएको छु
सुनसरीको क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’ मा भोक्राहा गाउँपालिका हरिनगरा गाउँपालिकाका ६ वटा वडा र इनरुवा नगरपालिकाको तीनवटा वडा पर्छन् । यो क्षेत्र मात्र होइन, पूर्वी नेपालमै सबैभन्दा बलियो प्रदेश १ को सुनसरी नै मानियो र नेपाली कांग्रेसको साखलाई जोगाइराख्न सफल भयो । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा मुस्लिम समुदायका ७३ वर्षीय स्थानीय नेता महमद ताहिर मियाँले जित हासिल गरे । उनी हालसम्म निर्वाचितमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन् । सम्भवतः अब ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले ताहिर मियाँले नै प्रदेश १ को पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । कक्षा १ पनि नपढेका र मुस्किलले लेखपढ गर्न सक्ने उनले माओवादी नेता तथा पूर्व बिना विभागीयमन्त्री जाकिर हुसेनलाई ४ हजार १ सय ५५ मतले पराजित गरे । मियासँग राजधानीकर्मी टीकाराम नेतीले गरेको कुराकानी ।
महमद ताहिर मिया
प्रदेशसभा सदस्य, सुनसरी–४ (ख)
तपाईंको खास उमेर चाहिँ कति भयो ?
७३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब ७४ वर्ष लाग्दैछु ।
यो त तपाईंको घरमै बसेर नाति नातिना खेलाउने उमेर हो नि ?
एउटा मन त मेरो पनि त्यस्तै थियो । तर पार्टीले फुर्सद दिएन । चुनाव लड्ने जिम्मेवारी दियो । त्यसैले निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएको थिएँ । जितेको छु । राजनीतिमा गिरिजाबाबुबाट प्रेरणा पाएको छु, इमानदार रहन्छु ।
जनताले युवा नेता चाहन्छन्, जेष्ठ नागरिक र पुराना नेताले अब विश्राम लिनुपर्छ भन्दैछन् तर तपाईंले त यो उमेरमा पनि चुनाव जितेर देखाई दिनुभयो त ?
जसले काम गर्छ, एक पैसा खाँदैन, उसैलाई जनताले विश्वास गर्छन् । म यो क्षेत्रमा तीन पटकसम्म जनप्रतिनिधि भएर काम गरिसकेको छु । त्यसैले मलाई जनताले रोज्नु स्वाभाविक हो । मेरो एक पैसा घुस खाएको रेकर्ड छैन । सधैं निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्दै आइरहेको छु ।
सबैले यसै भन्छन्, तर कामचाहिँ गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?
मैले प्राप्त गर्ने सरकारले दिइरहेको भत्ता पनि यहाँका गरिब दुःखीलाई नै बाँडी दिने गरेको छु । मलाई सरकारले दिएको पैसा त मैले आफै खाएको छैन, कसरी सरकारी बजेट खान्छु ? यो कुरा मेरो क्षेत्रका सबै जनतालाई थाहा छ । मलाई यहाँ के गर्नु पर्छ, के हुँदैन ? कहाँ–कहाँ के–के चाहिएको छ भन्ने सबै मलाई राम्रैसँग थाहा छ । यसले गर्दा पनि मलाई काम गर्न सजिलो छ । म तीन कार्यकाल गाविस चलाएको मान्छे हुँ । अहिलेसम्म मेरो नाममा एक लिटर पेट्रोलको बिल पनि गाविसमा छैन । मतलव मैले गाविसको एक रूपैयाँ पनि चलाएको छैन । त्यसैले म काम गर्न सक्छु ।
निर्वाचनमा फेरि जित प्राप्त गर्नुभएको छ । अब के के गर्ने योजना छ ?
जनताको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा आएको छ । स्वाभाविक रूपमा जनताले मबाट धेरै आशा पनि गरेका छन् । म धेरै धनीमानी मान्छे छैन तर पनि जनताले माया गरेका छन् । सरकारले जे दिन्छ, त्यो सबै जनतासमक्ष इमानदारपूर्वक पु¥याउँछु । जनताले पनि म इमानदार भएकै कारण मलाई जिताएका हुन् । विगतमा पास भएँ, अब फेरि परीक्षा सुरु भएको छ । मलाई विश्वास छ, म फेरि शतप्रतिशत उत्तीर्ण हुन्छु ।
तीन÷तीनपटक नेतृत्व गरेको क्षेत्र भन्नुहुन्छ । बाटो पुल कल्भर्ट गतिला देखिँदैनन् । जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा तपाईं इमानदार भएर के गर्नु ?
प्राप्त विकास बजेटको आधारमा भन्नुपर्दा यहाँ जति कतै पनि काम भएको छैन । यसअघि सक्ने जति काम गरेको मेरो दाबी छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हँुदा धेरै बजेट ल्याएर काम गराएको छु । पुल बाटो बाढी नियन्त्रणको काम गरेको छु । यो सबै देखेर फेरि जनताले मलाई नै रोजेका हुन् । मैले विगतमा गरेको कामको मूल्यांकन गरेरै मत दिएका हुन् ।
तपाई मुसलमान समुदायको मान्छे, अन्य समुदायको भोट कस्तो पाउनुभयो ?
म मुसलमान भए पनि मलाई सबै समुदायको नसोचेको भोट आयो । मलाई मुस्लिम समुदायभन्दा पनि अन्य समुदायको भोट धेरै आएको देखियो । बरु मैले त कतिपय क्षेत्रमा आशा गरेको थिइनँ । बरू आफ्नै समुदायले कम विश्वास गरेजस्तो लाग्यो । मैले सबै समुदायको विश्वास जितेको प्रमाण हो यो ।
यो बुढेसकालमा पनि चुनाव लड्न किन मन लाग्यो ?
मैले त चाहेको थिइनँ, पार्टीले निर्णय ग¥यो । त्यसपछि मैले पनि स्वीकारेको हुँ । म हज गएको बेला निर्णय भएछ, खबर प्राप्त भयो, मैले ‘हुन्छ’ भने । यति समय इमानदार भएर काम गरें, अब अन्तिमपटक यो प्रमाणित गरिदिन्छु भनेर उठेको हुँ । मृत्युको कुनै ठेगान हँुदैन तर जति समय बाँच्छु, जनताको काम गरेरै बाँच्छु भन्ने मेरो सोचाइ हो । ममाथि सबैले विश्वास गरेकाले पनि नकार्न सकिनँ । जनताको ऋण कति तिर्न सक्छु, हेरौं । काम गर्न सक्छु भनेर फेरि आँटेको छु ।
उमेर गएका नेताहरूले राजनीति नछाडेर देश बिगारे भन्ने आरोप छ नि ?
स्वाभाविक हो । लामो समयसम्म नेपालमा चुनाव भएन । युवाले मौका पाएनन् । अनि पटकपटक तिनै नेता सत्ता र विभिन्न निकायमा पुग्दा त्यस्तो लाग्नु ठीकै हो र हामीले पनि केही बिगारेका छौं । त्यसलाई अब सुधार्दै जानुपर्छ । अस्थिर शैलीमा कुरा गर्ने अनि युवालाई सम्झाउन नसक्नु पनि हो । २० वर्षसम्म राजनीतिमा युवाहरूको ग्याप भयो । यो पिढी त्यति सजिलै आउन चाहेर पनि अप्ठेरो छ । यो सम्पत्ति कमाउने व्यवसाय होइन, सेवाको क्षेत्र हो ।
पुराना पुस्ताले राजनीतिमा आउन युवालाई छेकेकै हुन् त ?
होइन म पनि युवालाई हस्तान्त्रण गर्न चाहन्छु । लिनका लागि तयार छन् ? इमानदार भएर गर्न सक्छन् त अब आउने पिढीले ? पहिलै स्वार्थ चाहनेलाई गाह्रो छ राजनीति गर्न । यो सेवाको भावले खट्नुपर्ने क्षेत्र हो । भगवान खुदाको पनि साथ सहयोग कृपा रहनुपर्छ । भविष्यको कुरा जान्दिनँ । जतिन्जेल बाँच्छु इमानदार भएर बाँच्छु ।
जनताले तपाईंलाई नै भगवान सम्झेर माला लगाइदिएका छन् । खुदा देखाएर भाग्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । जे सरकारले दिन्छ, सबै जनतालाई बाँडिदिन्छु । म भगवान होइन । चाहे जति सबै गर्न सक्दिनँ । सरकारले दिन्छ भने त गर्न पाउँछु, आशा छ गर्छु ।
अब त नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । चाहेजति काम गर्न सकिन्छ र ?
मान्छे जो भए पनि विकासका लागि छुट्याएको त्यो सबैतिर जाने हो । यहाँ पनि त्यही अनुपातमा आउने हो । सत्तामा भए पनि प्रतिपक्षमा भएपनि काम गर्ने कुरामा फरक पर्दैन । मैले विकास ल्याउन सकिनँ भने सक्षम नेता होइन । जनताले पटकपटक मत दिएका छन् । आफ्नो दायिŒव पूरा गर्न अहोरात्र खटिरहन्छु । त्यहाँ जे हुन्छ, जनतालाई ल्याएर सबै जस्ताको त्यस्तै सुनाउँछु ।
कुनै पनि धार्मिक कार्यका लागि बजेट आएमा मन्दिर, मस्जिद्, गुम्बा, चर्चमध्ये कुनलाई प्र्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
आवश्यकता कहाँ, के छ, त्योअनुसार खर्च गर्नुपर्छ । सीमित बजेटबाट एकैपटक सबै चिज बनाउन सकिँदैन । मेरा लागि सबै बराबर हुन् । यहाँ जातीय, धार्मिक बिखण्डन आएको छैन र आउँदैन पनि । म मुस्लिम हुँ, मन्दिर छिरेर पूजा गर्दिनँ तर मन्दिरप्रति पनि मेरो धेरै दायिŒव छ । म सामान्य परिवारको मान्छे हुँ तर त्यो सबै भत्ता गरिबलाई बाँडछु ।
कांग्रेसले मुलुकभर हार बेर्होर्नुका कारण के होला ?
आन्तरिक चलखेल र खुट्टा तानातान प्रमुख कारण हो । यो समानुपातिकमा आएको मतबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । टिकट वितरण पनि वैज्ञानिक भएन । अब पार्टीको सबै तहको संगठन सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।